यी हुन काठमाडौंका ११ सरकारी स्कुल, जहाँ प्राइभेटमा भन्दा राम्रो पढाई हुन्छ!! – Nepal
अप्रील 3, 2018 अप्रील 12, 2018 admin	Comment(0)
कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने नीलबराहीले आगामी वर्षमा कक्षा ९ मा पढाइ गर्ने उनले जानकारी गराए। ज्ञानोदय स्कुलका २० वर्षदेखि कार्यरत पूर्वप्रधानाध्यपक धनञ्जय शर्मा अभिभावकसँग बालबालिकाको पढाइका ’boutमा छलफल गर्ने र ती छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकले मिहेनत गरे सामुदायिकको पनि पढाइ गुणस्तर बनाउन सकिने बताउछन्। कीर्तिपुरको जनसेवा माविका शिक्षक चन्द्र बानियाँ प्रवेश परीक्षाले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउँदै शिक्षक र अभिभावकको सक्रियता हुने हो भने यी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अझ बढ्ने धारणा राख्छन्।
रत्नराज्य स्कुलकी प्राचार्य गीता खरेल (शिवाकोटी) अभिभावकले बोर्डिङ स्कुलबाट समेत विद्यार्थी निकालेर ल्याउन थालेपछि सबैलाई भर्ना लिन नसकिएको बताउँछिन् । रत्नराज्य स्कुलले शिशु कक्षादेखि नै अंग्रेजी माध्यममा पढाउने गरेको छ । विद्यार्थीले एसएलसीमा ९० देखि ९५ प्रतिशत ल्याउने गरेका छन् ।
हाम्रो स्कुल बोर्डिङभन्दा राम्रो छ
कक्षा ९, रत्नराज्य मावि
म यहाँ आउनुअघि बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थें । सरकारी भए पनि यहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर भर्ना भएको हो । यो स्कुलको परीक्षा तथा अध्यापन प्रणालीमा बोर्डिङको भन्दा राम्रो छ । राम्रो पढाइ भए पनि अतिरिक्त क्रियाकलपका लागि खेल मैदानको भने अभाव छ । विद्यार्थी धेरै भएका कारण पनि सबैलाई खेल मैदानको व्यवस्था गर्न नसकिएको हुनसक्छ । आउटडोर गेमको लागि स्थान नभए पनि इनडोर गेमको भने विद्यालयमा सुविधा छ । हाम्रो कक्षामा देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका विद्यार्थी भएकाले अध्ययन र अन्य विषयको जानकारी लिन सजिलो भएको छ ।
कक्षाकोठा अभावमा भर्ना लिन सकिएको छैन
सहायक प्रधानाध्यापक, रत्नराज्य मावि
रत्नराज्य स्कुलमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीको संख्या १९ सयभन्दा बढी छ । यो स्कुल सामुदायिक भए पनि विद्यार्थीको चाप थेग्नै नसक्ने छ । कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीको संख्यामात्र हिसाब गर्ने हो भने लगभग १५ सय हुन आउँछ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा मात्र ७० भन्दा बढी बालबालिका छन् । विद्यार्थी संख्या अनुपातमा अभैm पनि १५ वटा कक्षा अपुग छ । कक्षाकोठाको अभावमा नर्सरी र युकेजीका बालबालिकालाई एकै स्थानमा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । भूकम्पपछि समयमा विद्यालय भवन बन्न नसक्दा कक्षा ८ र ९ मा भर्ना हुन आएका २ सय विद्यार्थी फर्किएका छन् । शिक्षक र कक्षा कोठा पर्याप्त भए भर्ना हुन आएका सबैलाई भर्ना गर्ने योजना छ । पूर्वाधार सुधार गर्न सके अझै राम्रो शिक्षा दिन सक्छौं ।
कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं दस वर्षको हुनुहुन्छ। मध्यवर्गीय सहरमा बस्नुहुन्छ। र, आफ्नो साथीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ। साथीको घर हिँडेर ५ मिनेटमा पुगिन्छ। जान भने सक्नुहुन्न। किन? तपाईं र साथीको घरबीच वारपार फिँजारिएको खतरनाक सडक पर्खाल बनेर उभिएको छ। साथीको घर जान मात्र होइन, नजिकै पार्क जान पनि यस्तै फराक र जोखिमपूर्ण सडक पार गर्नुपर्छ। तपाईं आमाबाबु वा आफूभन्दा […]